नक्कली अनशन बसेर इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न पाइँदैन
यहाँ केही पनि सम्झौता तोडिएको छैन । बुझाइमा भएको गल्ती हो । उहाँहरूले आफ्नै किसिमको व्याख्या गर्नुभएको छ । पहिलो कुरा त मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने यस किसिमका सम्झौताहरू गरिराख्नुपर्ने जरुरी थिएन । अस्पतालमा अनशन बस्छन्, जबकि सर्वोच्च अदालतले अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनशन बस्नुहुँदैन भनेर परमादेश जारी गरिसकेको छ । कानुनको उल्लंघन गर्दै कोही मान्छे अनशन बस्छ भने त्यस्ता मान्छेलाई त्यहाँबाट मुन्ट्याउनुपथ्र्यो । अस्पताल भनेको बिरामी जाँच्ने ठाँउ हो । चिकित्सकहरूको पठनपाठन गर्र्नेे ठाउँ हो । त्यहाँ अनशन बस्न दिइयो, त्यो हामीलाई चित्त बुझेकै थिएन ।
अस्ति इलाममा को–को जानुभएको थियो, स्पष्ट नै छ नि ! दमन ढुंगानाजीहरू, सुशीला कार्कीजीहरू, सुन्दै छु अनमिनका इयान मार्टिनहरू पनि पुग्नुभएको रहेछ । नेपाललाई कमजोर पार्ने निश्चित डिजाइनबाट यो खेल चालिएको रहेछ । नेपालका प्रमुख संवैधानिक निकायहरूलाई कमजोर पार्ने, मानमर्दन गरिदिने, अस्पतालमा अनशन बसेर ‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश माफिया हो, त्यसलाई निकाल्छु’, ‘प्रधानमन्त्री माफिया हो, त्यसलाई निकाल्छु’ भन्ने यस्तो अराजक किसिमको गतिविधि भइराखेको छ जुन गतिविधि हामीलाई पटक्कै चित्त बुझेको थिएन । मैले त अनशनको आठौंपटकदेखि टेलिभिजनमा सार्वजनिक रूपमा बोलेर अनशन छारस्ट पारिदिएको हुँ । र, यो अनशन पनि होइन ।
अनशन होइन नि । यो अनशनको नाममा नक्कली अनशन हो । मजासँग बेडमा बस्ने, डिप लगाएको छ, भिटामिन्सहरू गएको छ, माइक्रोन्युटिन्सहरू गएको छ, मोनिटरीङ भएको छ, सबै डक्टरहरू, नर्सहरू वरिपरि राखेर मजासँग इन्टरनेट हेरेको छ । यस्तो पनि अनशन हो । त्यसलाई अनशन भनिन्छ ? अस्पतालको आइसीयू बेड भनेर गम्भीर बिरामीहरूका लागि हो । रहर गरेर बस्ने कोही डाक्टरका लागि होइन त्यो । उहाँलाई त प्रोटेक्सन छ ।
त्यो होइन । भनाइ मात्रै हो । अहिलेका विग मिडीयाहरूले देखाएको भ्रम हो । हो, उहाँले बिहे गर्न सक्नुभएन । उहाँले घर व्यवहार जोडन सक्नुभएन । त्यो उहाँको कमजोरी होला, मलाई थाहा छैन । उहाँले मास्टर डिग्री स्कलरसिपमा बंगलादेशमा पढेको हो । यदि उहाँ नैतिकवान् हुनुहुन्थ्यो भने त्यतिखेरको स्वास्थ्य मन्त्रालयले उहाँलाई जिल्लामा खटाउन खोज्दाखेरी भागेर हिँडनुभएको हो । त्यसो हुनाले उहाँले त्यो पैसा नेपाल सरकारलाई तिर्नुप¥यो । भागेर टिचिङ हस्पिटलमा आउनुभएको हो उहाँ । खै त उहाँको नैतिकता ? अर्थोपेडिक सर्जन हो उहाँ । अहिले सिटामोल बाँड्दै खोला तरेका, लौरो टेकेका तस्बिरहरू निकाल्नुहुन्छ उहाँ । उहाँलाई इमोस्नल ब्ल्याकमेल गर्छु र यसरी सेलिब्रेटी पल्टिन्छु भन्ने लागेर योजना बनाएर नै उहाँले त्यसरी फोटा खिच्दै हिँडनुभएको रहेछ । देशमा थुप्रै यस्ता डाक्टरहरू छन्, जसले धेरै उदाहरणीय कामहरू गरेक छन् । कसैले पनि यसरी फोटो खिचेर रेकर्ड राखेका छैनन् । किनभने, डाक्टरको काम भनेको सेवा गर्ने हो, त्यसैका लागि हामी पढ्न आएका हौं । त्यसकारण कुनै पनि हिसावले उहाँ राजनीतिक ढंगले आइरहनुभएको छ । उहाँ के हो भन्ने कुरा उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि हेरौं । उहाँलाई मान्छेले निहित स्वार्थका लागि गोटी बनाएका छन् र उहाँ गोटी बन्नमा पनि मजा मान्नुहुन्छ । चुनावमा त सिधै गगन थापालाई भोट हाल । कांग्रेस ठीक हो भनिसक्नुभएको थियो । उहाँ कम्युनिस्टलाई देखिसहनुहुन्न । कम्युनिस्टको दुई तिहाइ बहुमत भएको हुनाले उहाँलाई जलन भएको छ ।
स्पष्ट हो नि । गोविन्द केसीजस्तालाई देखाएर विवेकशील साझा पार्टीजस्ता आएका हुन् नि ! अहिले बाबुराम भट्टराईजी पनि त्यहाँ मलजल गर्न पुग्नुहुन्छ । अहिले कांग्रेस पनि एजेन्डाविहीन भएको छ । धेरै जस्तो सरकार उसैले बनाएको हो, आफ्ना पालमा भुत्लोभाङ केही गर्नु छैन । देशका कलकारखाना, उद्योगधन्दा सबै माटोमा मिलाइएका छन् । यो कम्युनिस्ट सरकारले केही राम्रो काम गर्ला र ५० वर्षसम्म सत्ता नआउला भन्ने कुराको छटपटी हो त्यो ।
हो , पेल्नुपथ्र्यो । त्यसरी राज्यको काम नगरी सरकारको तलब खाएर सरकारलाई नै गाली गर्न उनले मिल्दैनथ्यो । उनले पहिलोपटकको अनशनको पहिलो दिनबाटै बिदा लिनुभएको छ । उहाँलाई बोक्ने केही मिडिया हाउसहरू छन् । विदेशी शक्तिहरूको एउटा समूह रहेछ, जसले नेपाललई तजसनहस पार्ने । त्यसैले उनीहरूले डा. केसीलाई प्रभावित पारेका रहेछन् । हिरो पनि हुन पाइयो । मिडियाले पनि ‘हाइ’ भन्छन् । जताततै उनको क्रेज छ । उनले त यती धेरै बोल्न थाले कि अहिले त प्रधानमन्त्री निकाल्छु भन्छन् । अस्पतालको बेडबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई यो माफिया हो, यसलाई निकाल्छु भन्न सक्नेलाई कानुन लाग्दैन । यदि कानुन छ भने उहाँलाई तुरुन्तै हस्पिटलबाट निकालियोस्, उनको ठाउँमा बेड नपाउने बिरामीहरूलाई त्यसमा राख्न सकिन्छ । त्यो अनशन गर्ने ठाँउ होइन । त्यसमा गम्भीरतापसर्वक ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले त्यहाँबाट उनलाई तुरुन्त निकालिदिनुप¥यो । कहाँ लाने हो, लगे हुन्छ । तुरुन्त मानसिक अस्पताल लाने हो कि अन्यत्र लाने हो । इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न पाँइदैन । यो हाम्रो कुरा हो ।
उहाँलाई चलाउने एउटा गिरोह छ । त्योचाँही देख्दा बहुतै आदर्शवादी बन्छ । मेडिकल शिक्षा निःशुल्कको कुरा उठिरहेको छ । विधेयकमा १० वर्षपछि त नाफारहित ढंगले खुल्दैनन् । देशैभरि हरेक प्रदेशमा सरकारले खोल्न चाहिरहेको छ । त्यसमा पनि उहाँहरूलाई औडाहा भएको छ । कसरी अवरोध गर्ने भन्ने मात्र उनीहरूको ध्यान छ । चिकित्सा आयोग बनाउ भन्नुहुन्छ । तर विरोध पनि गर्नुहुन्छ । किनकि उहाँले भनेको मान्छे आयोगमा नपर्न पनि सक्छ । सरकारले आयोगमा कसलाई राख्छ, त्यसकारण त्यसलाई ठेल्न उहाँले यो काम गरिरहनुभएको छ । अनि उपत्यकाभित्र नदेऊ भन्छ । केसीले भनेका मागमा अरू मान्छेले किन घुँडा टेकेको ? मनमोहनको नामबाट आउन खोजेको कलेजलाई किन आशयको चिठी दिएको ? व्यक्तिविशेषको मुनाफासहित भन्दा पनि त्यो सहकारीको अवधारणामुताबिक गर्न सजिलो थियो । किन नदिएको ? उहाँले नै घुँडा टेकाएको होइन ? त्यसमा घुँडा टेकाएपछि उहाँलाई आफूलाई आफुभन्दा मान्छे अरू राम्रो लागेन । अहिले डा. केसीको ध्यान पूर्वको बिएन्डसी र मनमोहन अस्पतालको कसरी रोक्ने भन्नेमै छ । उहाँले सिन्डिकेट खडा गर्नुभएको छ । हामीले त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्नुपर्छ ।
विगत ४४ वर्षदेखि म पनि त्यही कार्यमा छु । सबैतिर राम्रो पर्फर्मेन्स छ । म डिन हुन सक्ने एकदम मजाको मान्छे । तर उहाँलाई मजस्तो आउला कि भन्ने चिन्ता छ । म पनि ४३ वर्षदेखि संगसँगै छु । उहाँले भनेको डिनहरू आउँदै–जाँदै भए । विश्वविद्यालयले एउटा प्रक्रिया पु¥याएर योग्य मध्यकालाई डिन नियुक्त गर्ने हो । उहाँले भनेको मान्छे मात्र हुन्छ । उहाँले डिक्टेट गर्ने हो र ? हु इज हिम ? उहाँको विर्ता हो चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान ? त्यसकारण, यसचोटि उहाँलाई त्यहाँबाट निकाल्ने । चुनावमा जितेको छ भन्दैमा पब्लिकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल पनि गर्नुपर्दैन । आदरणीय देशभरिका बिरामीहरू सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने डाक्टरहरू सेवा ठप्प पार्न आन्दोलनको आह्वान गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता डाक्टरहरूलाई ठीक स्थानमा ल्याउनुपर्छ । हुन्न भने तपाईंहरूले फेरि बिरामी छुन पाउँदिनँ भनेर आवाज निकाल्नुस् । एउटा संवेदनशील ठाँउमा बस्ने, अनि सक्दिनँ भन्ने ।
बेला न कुबेला किन नेकपामा गएको ? भन्नेहरु धेरै छन्
सेनासँग भएको प्रविधि र जनशक्तिले फास्ट ट्र्याक बन्दैन
आफ्नो क्षत्रमा एउटै पनि योजना नपर्दा मलाई कस्तो भएको होला ?